အမျိုးသားတွေ ပါဝင်ပေးရမယ့် အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးကိစ္စများ - ဒေါက်တာ ဖြိုးသီဟ
ညေးတို့ဖတ်ဖို့ – ၁၀
ညေးတို့ဖတ်ဖို့ – ၉
အမျိုးသားတွေ ပါဝင်ပေးရမယ့် အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးကိစ္စများ
December 18, 2017 Dr. Phio Thiha
ဒီနေ့ခေတ်မှာ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာ တော်တော်များများကို ရှေ့တန်းတင် ပြောဆိုလာကြတာ သတိထားမိမှာပါ။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေ ရှိသလဲ အသိပညာပေးကြတယ်၊ ဒါမှ သူတို့အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အခြေခံအခွင့်အရေးတွေအကြောင်း သိလာမယ်၊ တောင်းဆိုတတ်လာမယ်။ သူတို့ကိုချည်း ပြောနေလို့မရဘဲ တစ်ဖက်မှာလည်း အမျိုးသားတွေရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိလာအောင် ကြိုးစားကြရပါတယ်။ ဒါမှ အောင်မြင်မှာပါ။
ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ အမျိုးသမီးတွေ ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေမှာ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုပါဝင်လို့ရသလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ အဆုတ်ကင်ဆာ အားလုံးရဲ့ (၉၀)ရာခိုင်နှုန်းက ဆေးလိပ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ တခြားအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေ၊ နှလုံးရောဂါ၊ သွေးကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါတွေ၊ လေဖြတ်တာ စသဖြင့် အများကြီးကို ရှိပါတယ်။
အရက်နဲ့မတူတာကတော့ သောက်တဲ့သူတင် ဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲ ဘေးနားက ရှူတဲ့သူပါ ရောဂါဖြစ်နိုင်တာပါပဲ။ ယောကျာ်းက ဆေးလိပ်သောက်တတ်တယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးဖြစ်သူမှာလည်း အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းထိ မြင့်တက်စေတယ်။ အဲဒီအပြင် ကိုယ်ဝန်ရဖို့ခက်သွားတတ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ရှူမိရင် လမစေ့ဘဲမွေးတာ၊ ကလေးအသေ မွေးတာ၊ ပေါင်မပြည့်တာ၊ မွေးပြီးပြီးချင်း ဆုံးပါးသွားတာ၊ ဒါမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဖြစ်အများဆုံး ကင်ဆာဆိုရင် ရင်သားကင်ဆာ၊ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ၊ အဆုတ်ကင်ဆာ စသဖြင့် အစဉ်လိုက် ရှိပါတယ်။ အရင်ကတော့ ရင်သားကင်ဆာနဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာက အမျိုးသမီးတွေပဲ အဓိကဖြစ်ပြီး၊ အဆုတ်ကင်ဆာကတော့ အမျိုးသားတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူနေမှုပုံစံအရ အမျိုးသမီးတွေ ဆေးလိပ်သောက်တာ အင်မတန်ရှားတာကိုး။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အမျိုးသမီးတွေလည်း အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်လာကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ အကြောင်းတစ်ခုကတော့ ဒီလိုဆေးလိပ်ငွေ့တွေနဲ့ ထိတွေ့မိတာကြောင့်ပါပဲ။
နောက်တစ်ခုက Third hand smoke လို့ခေါ်တဲ့ ဆေးလိပ်ငွေ့ရဲ့ အကြွင်းအကျန် ဓါတုဓါတ်တွေက အိမ်ရဲ့ အတွင်းပိုင်း နံရံ၊ ကော်ဇော၊ ကြမ်းပြင်တွေမှာ၊ ကိုယ့်ရဲ့ အကျီ၊ လက်ချောင်း စတာတွေမှာ ကပ်ကျန်နေတတ်တာကိုလည်း တွေ့လာရပါတယ်။ ဒီကနေတစ်ဆင့် ကလေးဆီကို ရောက်သွားပြီး ကလေးကလည်း ဒီဓါတုပစ္စည်းတွေနဲ့ ထိတွေ့ရသလို ဖြစ်သွားမှာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ အပြင်မှာထွက် ဆေးလိပ်သောက်မယ်ဆိုတောင်မှ ဆေးလိပ်ငွေ့ရဲ့ အန္တရာယ်က ကိုယ့်အမျိုးသမီး၊ ကိုယ့်သားသမီးအတွက် ရှိနေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ လိင်မှုကိစ္စမှာ စောင့်ထိန်းဖို့၊ တာဝန်ယူမှုရှိဖို့
အကောင်းဆုံးကတော့ တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ကျင့်သုံးတာပါပဲ။ ဒါဆိုရင် လူမှုရေးပြဿနာတွေလည်း ကင်းသလို၊ လိင်ကတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေလည်း မရတော့ဘူးပေါ့။ တကယ်လို့များ အခြေအနေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မှားယွင်းခဲ့ရင်တောင်၊ တစ်ပါးသူနဲ့ ဆက်ဆံမိရင်တောင် ဒီအမျိုးသားဟာ တာဝန်သိဖို့ လိုပါတယ်။ အကာအကွယ် ကွန်ဒုံးသုံးတာမျိုးပေါ့။ အဲဒီလိုလည်း မသုံးမိလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အမျိုးသမီးအပေါ် ဖွင့်ဟပြောဆိုဖို့ လိုပါမယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ ကိုယ်ဟာ အကာအကွယ်မဲ့ ဆက်ဆံမိလိုက်တဲ့အတွက် လိင်ကတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါတခုခု ရလာနိုင်တယ်။ သိပ်ဆိုးရင် HIV ပိုးလောက်အထိ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီအခါမှာ ပုံမှန်အတိုင်း ဘာမှမဖြစ်သလို ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်ပြီး အမျိုးသမီးနဲ့ အတူနေလိုက်ရင် သူ့ဆီလည်း အဲဒီပိုးက ရောက်သွားနိုင်တယ်။ အချက်အလက်တွေအရ အာရှဒေသက အမျိုးသမီးတွေ ကာလသားရောဂါ ဖြစ်ရခြင်းအဓိကအကြောင်းက အမျိုးသားဆီက ကူးစက်တာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အမျိုးသမီးကို ရိုးရိုးသားသား ဖွင့်ဟပြောဖို့၊ တာဝန်သိဖို့ လိုပါမယ်။ အဲ့လိုပြောလိုက်ရင် အိမ်ထောင်ကွဲမှာပေါ့ ဆိုလာရင်တော့ အစောကတည်းက ဒီလိုမဖြစ်ချင်ရင် စောင့်ထိန်းပါ၊ အကာအကွယ်သုံးပါလို့ပဲ ပြန်ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေမှာ အင်မတန်မှကို အဖြစ်များတဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဆိုလည်း လိင်ကတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ Human Papilloma Virus လို့ခေါ်တဲ့ ပိုးကြောင့် ဒီကင်ဆာဖြစ်တာပါ။ အဲဒီပိုးက လိင်ဆက်ဆံရာကတစ်ဆင့် ကူးစက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလူတွေမှာ အဖြစ်များလဲဆိုရင် လိင်ဆက်ဆံဖက်များတဲ့သူ၊ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှု စတင်ခဲ့သူ၊ ကလေးအများကြီးမွေးထားသူ၊ အဲဒီထဲက တစ်ချက်ကတော့ ကိုယ့်ယောကျာ်းက လိင်ဆက်ဆံဖက်များရင် ကိုယ့်မှာ သားအိမ်ခေါင်းဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများတာပါပဲ။ HIV ပိုး၊ ကာလသားပိုးတွေက နှစ်ဦးအတူတူ ကူးစက်ခံရပါတယ်၊ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာလို ရောဂါမျိုးကတော့ အမျိုးသမီးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို လုပ်မနေဘဲ၊ ကိုယ့်အမျိုးသမီးရဲ့ လိင်မှုဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအတွက် စောင့်ထိန်းသင့်တာတွေ စောင့်ထိန်းကြဖို့ လိုပါတယ်။
၃။ သားဆက်ခြားတဲ့ကိစ္စမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့
သားဆက်ခြားတာဆိုလည်း အမျိုးသမီးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့ တော်တော်များများက ထင်တတ်ကြပါတယ်။ သားအိမ်ဆိုတာကလည်း အမျိုးသမီးမှာပဲ ပါတယ်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကလေးမွေးရတယ်ဆိုလည်း သူပဲ လုပ်ရတာကိုး။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာလည်း အမျိုးသားတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ပါသေးတယ်။
တစ်ခါက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ ကြုံဖူးပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဆေးခန်းမှာ သားအိမ်ထဲထည့်တဲ့ပစ္စည်း လာထည့်သွားတယ်။ နောက် ၂ ရက်လောက်နေတော့ မျက်နှာမှာ ရောင်ကိုင်းပြီး ပြန်ရောက်လာတယ်။ ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ သူ ဒီပစ္စည်းသုံးသွားတာ ယောကျာ်းသိသွားလို့ တဲ့၊ ငါ့မပြောဘဲ လုပ်လာရအောင် နင်က ဖောက်ပြန်ချင်လို့လား ဆိုပြီး ရိုက်တာ တဲ့။ ဆိုလိုတာက ကျွန်တော်တို့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့် ယောကျာ်းက မိန်းမထက် တစ်ဆင့်မြင့်သလို ဖြစ်နေတယ်။ အမျိုးသမီးက သားဆက်ခြားချင်တယ်၊ ဒီနည်းတွေ သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တောင်မှ အမျိုးသားက ခွင့်မပြုလို့၊ သဘောမတူလို့ မသုံးရဘူးဆိုတာတွေ ရှိတယ်။ တချို့နေရာတွေမှာဆို ဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုတော့ နင့်ကို ငါယူထားတာ ကလေးမွေးဖို့၊ ဘာတားဆေးမှ မသုံးနဲ့ ဆိုပြီးတော့ကို ပြောထားတာတွေတောင် ကြုံဖူးတယ်။ ဒီလိုအနေအထားတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်တားဖို့၊ မိခင်သေနှုန်း၊ ကလေးသေနှုန်း လျော့ကျသွားမယ် ဆိုတဲ့ သားဆက်ခြားခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေရဖို့ ခက်ပါတယ်။
ခွင့်ပြုတယ် ဆိုရုံတင်မကဘဲ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ ထပ်ပြီးလုပ်ဆောင်သင့်တာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ ဒီသားဆက်ခြားနည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသမီးနဲ့အတူတူ တိုင်ပင်မယ်။ သူ့အတွက် ဘယ်နည်းလမ်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ၀ိုင်းစဉ်းစားပေးမယ်။ သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်း လေးစားပေးမယ်။ ဒါဆိုရင် အမျိုးသမီးအနေနဲ့ သူ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိုလို့ သက်သောင့်သက်သာ ခံစားရပါမယ်။
အဲဒီအပြင် တချို့သော သားဆက်ခြားနည်းတွေက အမျိုးသားတွေရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု လိုပါတယ်။ ဥပမာဆို ကွန်ဒုံး။ ကွန်ဒုံးက အမျိုးသမီးသုံး ရှိပေမယ့် အမျိုးသားသုံးလောက် ၀ယ်ရမလွယ်ဘူး၊ ရှားတယ်။ ဒီတော့ အမျိုးသမီးက ဟော်မုန်းရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ မခံစားချင်လို့၊ ကလေးကလည်း အခိုက်အတန့်လောက်ပဲ တားမှာမို့ ဒီနည်းလမ်းသုံးချင်တယ် ဆိုတဲ့အခါ အမျိုးသားရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု လိုလာတယ်။ နောက်ပြီး ရက်ရှောင်တဲ့နည်းတွေမှာဆိုလည်း အမျိုးသားက စနစ်တကျ လိုက်နာဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှ အမှားအယွင်းနည်းနည်းနဲ့ ကိုယ်ဝန်တားနိုင်မှာပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ အမျိုးသမီးကို ဖေးမကူညီပေးဖို့ပါပဲ။ သားဆက်ခြားနည်းတွေအားလုံးမှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဆိုတာ ရှိပါတယ်။ သုံးစမှာ သွေးဆင်းမယ်၊ ရာသီပုံမမှန်ဖြစ်မယ်၊ ဗိုက်အောင့်တာ၊ ခေါင်းမူးတာ၊ ပျို့အန်ချင်တာ၊ ၀လာတာ၊ ဒါတွေဖြစ်တတ်တယ်။ ဒီအခါမှာ အမျိုးသားက အားပေးမယ်၊ လိုအပ်တာ စောင့်ရှောက်ပေးမယ်ဆိုရင် ဒီအမျိုးသမီးက ဒီနည်းလမ်းကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ဆက်သုံးဖြစ်မယ်၊ ဒီတော့ သားဆက်ခြားခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရနိုင်တာပေါ့။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ သွေးနည်းနည်းဆင်းတာနဲ့ ပစ္စည်းသွားထုတ်လိုက်တော့ မင်းတခုခုဖြစ်ရင် မင်းပဲခံ ဆိုတာမျိုး ပြောလိုက်ရင်တော့ ဒီအမျိုးသမီးဟာ ဘယ်လိုမှ ဒါကို ဆက်သုံးဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြုံတွေ့နေရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် အမျိုးသားများရဲ့ အနီးကပ်အားပေးကူညီမှုက ဆရာဝန်၊ ဆရာမတွေက ပေးတဲ့ဆေးတွေလိုပဲ အကျိုးရှိစေပါတယ်။
တကယ်တော့ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးဆိုတာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ တောင်ပံတစ်စုံလိုပါပဲ။ တစ်ဖက်တည်း သန်စွမ်းနေလို့ မရပါဘူး။ တစ်ဖက်က ပျက်နေရင်၊ အားနည်းနေရင် နောက်တစ်ဖက်က ဘယ်လောက်လုပ်လုပ် အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ အမျိုးသမီး ဆိုတဲ့ တောင်ပံတစ်ဖက် သန်စွမ်းဖို့၊ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်း တိုးတက်လာဖို့၊ မဖြစ်သင့်တဲ့ ရောဂါတွေမဖြစ်ဖို့ အမျိုးသားများရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။
၃.၁၀.၂၁၀၇ ထုတ် Good Health ဂျာနယ်
ဒီနခေ့တျေမှာ အမြိုးသမီးတှနေဲ့ ပတျသကျတဲ့ အကွောငျးအရာ တျောတျောမြားမြားကို ရှတေ့နျးတငျ ပွောဆိုလာကွတာ သတိထားမိမှာပါ။ အမြိုးသမီးတှမှော ဘယျလိုအခှငျ့အရေးတှေ ရှိသလဲ အသိပညာပေးကွတယျ၊ ဒါမှ သူတို့အနနေဲ့ သူတို့ရဲ့ အခွခေံအခှငျ့အရေးတှအေကွောငျး သိလာမယျ၊ တောငျးဆိုတတျလာမယျ။ သူတို့ကိုခညျြး ပွောနလေို့မရဘဲ တဈဖကျမှာလညျး အမြိုးသားတှရေဲ့ ပူးပေါငျးပါဝငျမှုရှိလာအောငျ ကွိုးစားကွရပါတယျ။ ဒါမှ အောငျမွငျမှာပါ။
ဒီဆောငျးပါးမှာတော့ အမြိုးသမီးတှေ ကွုံတှရေ့တတျတဲ့ ကနျြးမာရေးပွဿနာတှမှော အမြိုးသားတှအေနနေဲ့ ဘယျလိုပါဝငျလို့ရသလဲဆိုတာကို ဆှေးနှေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
ဆေးလိပျရဲ့ဆိုးကြိုးတှကေတော့ အမြားကွီးပါပဲ။ အဆုတျကငျဆာ အားလုံးရဲ့ (၉၀)ရာခိုငျနှုနျးက ဆေးလိပျကွောငျ့ဖွဈတယျ။ တခွားအသကျရှူလမျးကွောငျးဆိုငျရာ ရောဂါတှေ၊ နှလုံးရောဂါ၊ သှေးကွောနဲ့ပတျသကျတဲ့ ရောဂါတှေ၊ လဖွေတျတာ စသဖွငျ့ အမြားကွီးကို ရှိပါတယျ။
အရကျနဲ့မတူတာကတော့ သောကျတဲ့သူတငျ ဖွဈတာမဟုတျဘဲ ဘေးနားက ရှူတဲ့သူပါ ရောဂါဖွဈနိုငျတာပါပဲ။ ယောကျြားက ဆေးလိပျသောကျတတျတယျဆိုရငျ အမြိုးသမီးဖွဈသူမှာလညျး အဆုတျကငျဆာဖွဈနိုငျခြေ ၂၀ ရာချိုငျနှုနျးကနေ ၃၀ ရာခိုငျနှုနျးထိ မွငျ့တကျစတေယျ။ အဲဒီအပွငျ ကိုယျဝနျရဖို့ခကျသှားတတျတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျမှာ ရှူမိရငျ လမစဘေဲ့မှေးတာ၊ ကလေးအသေ မှေးတာ၊ ပေါငျမပွညျ့တာ၊ မှေးပွီးပွီးခငျြး ဆုံးပါးသှားတာ၊ ဒါမြိုးတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။
မွနျမာနျိုငျငံမှာ အဖွဈအမြားဆုံး ကငျဆာဆိုရငျ ရငျသားကငျဆာ၊ သားအိမျခေါငျးကငျဆာ၊ အဆုတျကငျဆာ စသဖွငျ့ အစဉျလိုကျ ရှိပါတယျ။ အရငျကတော့ ရငျသားကငျဆာနဲ့ သားအိမျခေါငျးကငျဆာက အမြိုးသမီးတှပေဲ အဓိကဖွဈပွီး၊ အဆုတျကငျဆာကတော့ အမြိုးသားတှပေဲဖွဈတယျလို့ ထငျကွပါတယျ။ ဘာလို့ဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ လူနမှေုပုံစံအရ အမြိုးသမီးတှေ ဆေးလိပျသောကျတာ အငျမတနျရှားတာကိုး။ နောကျပိုငျးမှာတော့ အမြိုးသမီးတှလေညျး အဆုတျကငျဆာဖွဈလာကွတာ တှရေ့ပါတယျ။ အကွောငျးတဈခုကတော့ ဒီလိုဆေးလိပျငှတှေ့နေဲ့ ထိတှမေိ့တာကွောငျ့ပါပဲ။
နောကျတဈခုက Third hand smoke လို့ချေါတဲ့ ဆေးလိပျငှရေဲ့ အကွှငျးအကနျြ ဓါတုဓါတျတှကေ အိမျရဲ့ အတှငျးပိုငျး နံရံ၊ ကျောဇော၊ ကွမျးပွငျတှမှော၊ ကိုယျ့ရဲ့ အကြီ၊ လကျခြောငျး စတာတှမှော ကပျကနျြနတေတျတာကိုလညျး တှလေ့ာရပါတယျ။ ဒီကနတေဈဆငျ့ ကလေးဆီကို ရောကျသှားပွီး ကလေးကလညျး ဒီဓါတုပစ်စညျးတှနေဲ့ ထိတှရေ့သလို ဖွဈသှားမှာပါ။ ဒါကွောငျ့မို့ အပွငျမှာထှကျ ဆေးလိပျသောကျမယျဆိုတောငျမှ ဆေးလိပျငှရေဲ့ အန်တရာယျက ကိုယျ့အမြိုးသမီး၊ ကိုယျ့သားသမီးအတှကျ ရှိနဦေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
၂။ လိငျမှုကိစ်စမှာ စောငျ့ထိနျးဖို့၊ တာဝနျယူမှုရှိဖို့
အကောငျးဆုံးကတော့ တဈလငျတဈမယားစနဈ ကငျြ့သုံးတာပါပဲ။ ဒါဆိုရငျ လူမှုရေးပွဿနာတှလေညျး ကငျးသလို၊ လိငျကတဈဆငျ့ ကူးစကျတဲ့ရောဂါတှလေညျး မရတော့ဘူးပေါ့။ တကယျလို့မြား အခွအေနေ အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ မှားယှငျးခဲ့ရငျတောငျ၊ တဈပါးသူနဲ့ ဆကျဆံမိရငျတောငျ ဒီအမြိုးသားဟာ တာဝနျသိဖို့ လိုပါတယျ။ အကာအကှယျ ကှနျဒုံးသုံးတာမြိုးပေါ့။ အဲဒီလိုလညျး မသုံးမိလိုကျဘူးဆိုရငျတော့ ကိုယျ့အမြိုးသမီးအပျေါ ဖှငျ့ဟပွောဆိုဖို့ လိုပါမယျ။ ဘာလို့ဆိုတော့ ကိုယျဟာ အကာအကှယျမဲ့ ဆကျဆံမိလိုကျတဲ့အတှကျ လိငျကတဈဆငျ့ ကူးစကျတဲ့ရောဂါတခုခု ရလာနိုငျတယျ။ သိပျဆိုးရငျ HIV ပိုးလောကျအထိ ဖွဈနိုငျတယျ။ ဒီအခါမှာ ပုံမှနျအတိုငျး ဘာမှမဖွဈသလို ဟနျဆောငျဖုံးကှယျပွီး အမြိုးသမီးနဲ့ အတူနလေိုကျရငျ သူ့ဆီလညျး အဲဒီပိုးက ရောကျသှားနိုငျတယျ။ အခကျြအလကျတှအေရ အာရှဒသေက အမြိုးသမီးတှေ ကာလသားရောဂါ ဖွဈရခွငျးအဓိကအကွောငျးက အမြိုးသားဆီက ကူးစကျတာဖွဈတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ အမြိုးသမီးကို ရိုးရိုးသားသား ဖှငျ့ဟပွောဖို့၊ တာဝနျသိဖို့ လိုပါမယျ။ အဲ့လိုပွောလိုကျရငျ အိမျထောငျကှဲမှာပေါ့ ဆိုလာရငျတော့ အစောကတညျးက ဒီလိုမဖွဈခငျြရငျ စောငျ့ထိနျးပါ၊ အကာအကှယျသုံးပါလို့ပဲ ပွနျဖွရေမှာဖွဈပါတယျ။
အမြိုးသမီးတှမှော အငျမတနျမှကို အဖွဈမြားတဲ့ သားအိမျခေါငျးကငျဆာဆိုလညျး လိငျကတဈဆငျ့ ကူးစကျတဲ့ ရောဂါတဈမြိုး ဖွဈပါတယျ။ Human Papilloma Virus လို့ချေါတဲ့ ပိုးကွောငျ့ ဒီကငျဆာဖွဈတာပါ။ အဲဒီပိုးက လိငျဆကျဆံရာကတဈဆငျ့ ကူးစကျပါတယျ။ ဘယျလိုလူတှမှော အဖွဈမြားလဲဆိုရငျ လိငျဆကျဆံဖကျမြားတဲ့သူ၊ အသကျငယျငယျနဲ့ လိငျဆကျဆံမှု စတငျခဲ့သူ၊ ကလေးအမြားကွီးမှေးထားသူ၊ အဲဒီထဲက တဈခကျြကတော့ ကိုယျ့ယောကျြားက လိငျဆကျဆံဖကျမြားရငျ ကိုယျ့မှာ သားအိမျခေါငျးဖွဈနိုငျခြေ ပိုမြားတာပါပဲ။ HIV ပိုး၊ ကာလသားပိုးတှကေ နှဈဦးအတူတူ ကူးစကျခံရပါတယျ၊ သားအိမျခေါငျးကငျဆာလို ရောဂါမြိုးကတော့ အမြိုးသမီးမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ အမြိုးသားတှအေနနေဲ့ ကိုယျနဲ့မဆိုငျသလို လုပျမနဘေဲ၊ ကိုယျ့အမြိုးသမီးရဲ့ လိငျမှုဆိုငျရာ ကနျြးမာရေးအတှကျ စောငျ့ထိနျးသငျ့တာတှေ စောငျ့ထိနျးကွဖို့ လိုပါတယျ။
၃။ သားဆကျခွားတဲ့ကိစ်စမှာ ပူးပေါငျးပါဝငျပေးဖို့
သားဆကျခွားတာဆိုလညျး အမြိုးသမီးနဲ့ပဲဆိုငျတယျလို့ တျောတျောမြားမြားက ထငျတတျကွပါတယျ။ သားအိမျဆိုတာကလညျး အမြိုးသမီးမှာပဲ ပါတယျ၊ ကိုယျဝနျဆောငျ ကလေးမှေးရတယျဆိုလညျး သူပဲ လုပျရတာကိုး။ ဒါပမေယျ့ ဒီနရောမှာလညျး အမြိုးသားတှရေဲ့ အခနျးကဏ်ဍက ပါဝငျပါသေးတယျ။
တဈခါက အမြိုးသမီးတဈယောကျနဲ့ ကွုံဖူးပါတယျ။ ဘာလဲဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့ဆေးခနျးမှာ သားအိမျထဲထညျ့တဲ့ပစ်စညျး လာထညျ့သှားတယျ။ နောကျ ၂ ရကျလောကျနတေော့ မကျြနှာမှာ ရောငျကိုငျးပွီး ပွနျရောကျလာတယျ။ ဘာဖွဈတာလဲဆိုတော့ သူ ဒီပစ်စညျးသုံးသှားတာ ယောကျြားသိသှားလို့ တဲ့၊ ငါ့မပွောဘဲ လုပျလာရအောငျ နငျက ဖောကျပွနျခငျြလို့လား ဆိုပွီး ရိုကျတာ တဲ့။ ဆိုလိုတာက ကြှနျတျောတို့ လူ့အသိုငျးအဝိုငျးရဲ့ သတျမှတျခကျြတှကွေောငျ့ ယောကျြားက မိနျးမထကျ တဈဆငျ့မွငျ့သလို ဖွဈနတေယျ။ အမြိုးသမီးက သားဆကျခွားခငျြတယျ၊ ဒီနညျးတှေ သုံးခငျြတယျဆိုရငျတောငျမှ အမြိုးသားက ခှငျ့မပွုလို့၊ သဘောမတူလို့ မသုံးရဘူးဆိုတာတှေ ရှိတယျ။ တခြို့နရောတှမှောဆို ဘယျလောကျဆိုးလဲဆိုတော့ နငျ့ကို ငါယူထားတာ ကလေးမှေးဖို့၊ ဘာတားဆေးမှ မသုံးနဲ့ ဆိုပွီးတော့ကို ပွောထားတာတှတေောငျ ကွုံဖူးတယျ။ ဒီလိုအနအေထားတှမှော အမြိုးသမီးတှအေနနေဲ့ ကိုယျဝနျတားဖို့၊ မိခငျသနှေုနျး၊ ကလေးသနှေုနျး လြော့ကသြှားမယျ ဆိုတဲ့ သားဆကျခွားခွငျးရဲ့ အကြိုးကြေးဇူးတှရေဖို့ ခကျပါတယျ။
ခှငျ့ပွုတယျ ဆိုရုံတငျမကဘဲ အမြိုးသားတှအေနနေဲ့ ထပျပွီးလုပျဆောငျသငျ့တာလေးတှေ ရှိပါတယျ။ ဘာလဲဆိုတော့ ဒီသားဆကျခွားနညျးတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး အမြိုးသမီးနဲ့အတူတူ တိုငျပငျမယျ။ သူ့အတှကျ ဘယျနညျးလမျးက အကောငျးဆုံးဖွဈမယျဆိုတာကို ၀ိုငျးစဉျးစားပေးမယျ။ သူ့ဆုံးဖွတျခကျြကိုလညျး လေးစားပေးမယျ။ ဒါဆိုရငျ အမြိုးသမီးအနနေဲ့ သူ့ရှေးခယျြမှုနဲ့ ပတျသကျပွီး ပိုလို့ သကျသောငျ့သကျသာ ခံစားရပါမယျ။
အဲဒီအပွငျ တခြို့သော သားဆကျခွားနညျးတှကေ အမြိုးသားတှရေဲ့ ပူးပေါငျးပါဝငျမှု လိုပါတယျ။ ဥပမာဆို ကှနျဒုံး။ ကှနျဒုံးက အမြိုးသမီးသုံး ရှိပမေယျ့ အမြိုးသားသုံးလောကျ ၀ယျရမလှယျဘူး၊ ရှားတယျ။ ဒီတော့ အမြိုးသမီးက ဟျောမုနျးရဲ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှေ မခံစားခငျြလို့၊ ကလေးကလညျး အခိုကျအတနျ့လောကျပဲ တားမှာမို့ ဒီနညျးလမျးသုံးခငျြတယျ ဆိုတဲ့အခါ အမြိုးသားရဲ့ ပူးပေါငျးပါဝငျမှု လိုလာတယျ။ နောကျပွီး ရကျရှောငျတဲ့နညျးတှမှောဆိုလညျး အမြိုးသားက စနဈတကြ လိုကျနာဖို့လိုပါတယျ။ ဒါမှ အမှားအယှငျးနညျးနညျးနဲ့ ကိုယျဝနျတားနိုငျမှာပါ။
နောကျဆုံးအနနေဲ့တော့ အမြိုးသမီးကို ဖေးမကူညီပေးဖို့ပါပဲ။ သားဆကျခွားနညျးတှအေားလုံးမှာ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးဆိုတာ ရှိပါတယျ။ သုံးစမှာ သှေးဆငျးမယျ၊ ရာသီပုံမမှနျဖွဈမယျ၊ ဗိုကျအောငျ့တာ၊ ခေါငျးမူးတာ၊ ပြို့အနျခငျြတာ၊ ၀လာတာ၊ ဒါတှဖွေဈတတျတယျ။ ဒီအခါမှာ အမြိုးသားက အားပေးမယျ၊ လိုအပျတာ စောငျ့ရှောကျပေးမယျဆိုရငျ ဒီအမြိုးသမီးက ဒီနညျးလမျးကို စိတျရှညျရှညျနဲ့ ဆကျသုံးဖွဈမယျ၊ ဒီတော့ သားဆကျခွားခွငျးရဲ့ အကြိုးကြေးဇူးတှကေို ရနိုငျတာပေါ့။ အဲဒီလိုမဟုတျဘဲ သှေးနညျးနညျးဆငျးတာနဲ့ ပစ်စညျးသှားထုတျလိုကျတော့ မငျးတခုခုဖွဈရငျ မငျးပဲခံ ဆိုတာမြိုး ပွောလိုကျရငျတော့ ဒီအမြိုးသမီးဟာ ဘယျလိုမှ ဒါကို ဆကျသုံးဖွဈတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးကွုံတှနေ့ရေတဲ့ အမြိုးသမီးတှအေတှကျ အမြိုးသားမြားရဲ့ အနီးကပျအားပေးကူညီမှုက ဆရာဝနျ၊ ဆရာမတှကေ ပေးတဲ့ဆေးတှလေိုပဲ အကြိုးရှိစပေါတယျ။
တကယျတော့ အမြိုးသားနဲ့ အမြိုးသမီးဆိုတာ ကမ်ဘာကွီးရဲ့ တောငျပံတဈစုံလိုပါပဲ။ တဈဖကျတညျး သနျစှမျးနလေို့ မရပါဘူး။ တဈဖကျက ပကျြနရေငျ၊ အားနညျးနရေငျ နောကျတဈဖကျက ဘယျလောကျလုပျလုပျ အောငျမွငျမှာမဟုတျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့မို့ အမြိုးသမီး ဆိုတဲ့ တောငျပံတဈဖကျ သနျစှမျးဖို့၊ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ကနျြးမာရေးအဆငျ့အတနျး တိုးတကျလာဖို့၊ မဖွဈသငျ့တဲ့ ရောဂါတှမေဖွဈဖို့ အမြိုးသားမြားရဲ့ ပူးပေါငျးပါဝငျမှု သိပျအရေးကွီးပါတယျ။
၃.၁၀.၂၁၀၇ ထုတျ Good Health ဂြာနယျ
← ညေးတို့ဖတ်ဖို့ – ၆
ဆယ်သွယ်ပြောဆိုခြင်း အနုပညာ →
စာဖတ်သူများအားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ခုလို ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာတွေကို ဖတ်ပေး၊ အားပေးကြတဲ့အတွက် တအားကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်က ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ရန်ကုန် ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ကနေ ဆေးပညာဘွဲ့ ရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနှစ် ဇူလိုင်လကုန်မှာ Marie Stopes International လို့ ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ အလုပ်ရခဲ့ရာကနေ လိင်နဲ့မျိုးဆက်ပွါး ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း နယ်ပယ်ထဲကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ ငယ်ငယ်က စာရေးဖို့မပြောနဲ့၊ စာစီစာကုံးတောင် အလွတ်ကျက်ဖြေခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ခုလို စာရေးသူတစ်ယောက် ဖြစ်လာစေခဲ့တဲ့နေရာမှာ အဲဒီ အလုပ်နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အတွေ့အကြုံတွေက အဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ခဲ့တာပါ။
Copyright © 2018 ဒေါက်တာ ဖြိုးသီဟ. All rights reserved.
Site by Newmen Web Solutions.